Archive du 20170712
Mpitarika ny TIM Arahi-maso akaiky
Miakatra ny maripana taorian’ny nahitan’ny fanjakana ny tanjaka ara-politika ananan’i Marc Ravalomanana sy ny Antoko Tiako I Madagasikara.
Antoko Marina Tsaratsara kokoa raha tsy kandida Rajaonarimampianina
Mbola mitana ny soso-keviny hatrany ny antoko Marina, araka ny nambaran’ny mpandrindra nasionaliny Ranaivoson Jean Désiré fa Atoa Hery
Fifidianana filoham-pirenena Tsy manaiky tsindry bokotra intsony ny CENI
Nampahatsiahy tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny biraony etsy Nanisana ny avy eo anivon’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) omaly fa nampita ny tatitry ny asa
Fanjakana HVM Mitady hirika hanasoketana an-dRavalomanana
Nampiseho ny hakanosana miaro tahotry ny antokom-panjakana ny sakantsakana samihafa natao tamin’ny fankalazana ny fanokafana ny faha-15 taona niorenan’ny antoko Tiako I Madagasikara ny sabotsy 8 jolay lasa teo,
Rivo Rakotovao Tsy mahalala menatra
Manangam-bovona i Rivo Rakotovao, filohan’ny antoko HVM sy ny ekipany amin’izao fotoana manoloana ny fahazakan’ny antoko Tiako I Madagasikara olona an’aliny ny 8 jolay teo.
Fanjakana sy ny Mpitsara Ady tsy mety vita
Nanomboka omaly ny fitokonana nataon’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara (SMM), izay efa manomboka hita fa miteraka fitarazoana eo amin’ny asam-pitsarana manerana an’I Madagasikara.
Mpivarotra fiara eny Analakely Voasazy avy hatrany izay tratra
Efa nisy 2 herinandro izay no namindrana ireo mpivarotra fiara teny Antanimbarinandriana.
Madagasikara Mitatao ny sazy iraisam-pirenena
Nilaza ny tompon’andraikitry ny Amnesty International aty Afrika Atsinanana Deprose Muchena,
Haingo Mpanoratra Marary mafy, mila tolo-tanana maika
Anisan’ny olona fanta-daza teo amin’ny sehatry ny kanto teto amintsika Razafiharijaona Haingo Michel. Sady mpanoratra izy no mpamoron-kira. Mpanakanto malaza maro be toa an-dry Bodo, Tovo J’hay, Bessa sy Lôla…
Rakotobe Michel Nahazo zafikely faharoa
Nitombo isa indray ny zafikelin-dRakotobe Michel, mpaka sarin’ny gazety Tia Tanindrazana. Rakotobe no hahafantaran’ny maro azy eo amin’ny sehatry ny fanaovan-gazety sy ny fakana sary.
Fikambanana Tandroharena Mila teny sy tany tony isika
Tsy nisy nanaja ny teny nomeny na ny sonia nataony ireo mpitondra nifandimby tao anatin’ny 26 taona nanoratan-dRado ilay tononkalo hoe “Mahagaga”,
Mamo miantso polisy !
Dia tena miherongerona indray ny fanjakana HVM amin’izao fotoana izao fa hampiharina, hono, ny lalàna manoloana ny zava-niseho tamin’ny 8 jolay nanaovan’ny Antoko Tiako i Madagasikara ny fanamarihana ny faha-15 taonany, saingy nanaovana ankasoparana.
Ampitatafika Anisan’ireo kaominina 1.000 nahazo ny FDL
Notanterahina nanomboka omaly tetsy Anosy ny fanofanana ireo Ben’ny tanàna sy mpitantam-bola ary ny lehiben’ny distrika ho an’ireo kaominina voafantina nahazo ilay famatsiam-bola “Fond de Développement Local”
Resabe momba ny laza adina BEPC Manazava ny minisitra Paul Rabary
Nivoaka tamin’ny fahanginana omaly ny minisitra Paul Rabary manoloana ilay feo mandeha fa mpampianatra ambony latabatra no nanao ny laza adina BEPC, antony tena nahasarotra ireo taranja sasany fa tsy mpampianatra tena mpanome lesona ny ankizy.
Fiofanana manamboninahitra any Frantsa Malagasy 3 no miomana hanainga
Rehefa nahatontosa sy nahomby tamin’ny fifaninanana izay nataon’izy ireo ny volana martsa teo dia miomana amin’ny